January 2022 - ONE DAILY MEDIA
hese bright, whimsical creations prove thatafresh perspective can make ordinary things unexpectedly uplifting. These bright, whimsical
Jan 31, 2022 One Daily Media
hese bright, whimsical creations prove thatafresh perspective can make ordinary things unexpectedly uplifting. These bright, whimsical creations prove that…
ပေါင်မုန့်စားတာကို လုံးဝရပ်လိုက်ရင် ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်မလဲ
ပေါင်မုန့်စားတာကို လုံးဝရပ်လိုက်ရင် ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်မလဲ မင်္ဂလာပါ။One Daily Pageမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်တဲ့ diet လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် လူအများစုက ပေါင်မုန့်ကို လုံးဝရှောင်လိုက်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခါမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ပေ့ခ်ျကနေ ပေါင်မုန့်စားတာကို လုံးဝရပ်လိုက်လျှင် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို…
အိမ်ကို သူခိုးမကပ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ
အိမ်ကို သူခိုးမကပ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ မင်္ဂလာပါ။One Daily Pageမှ ကြိုဆိုပါတယ်။သူခိုးတွေကိုယ်တိုင် အိမ်အလုခံရခြင်းကနေ ကာကွယ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ပြောပြခဲ့တယ်ဆိုတာ ယုံနိုင်ပါ့မလား။ ဘယ်လိုအခြေအနေမှာ ခိုးလို့ရသလဲဆိုတာတော့ သူတို့ထက် ပိုသိတဲ့လူ မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ပြောတာတွေက ယုတ္တိရှိပါတယ်…
မျက်မှန်တပ်သူများ သိထားသင့်သည့် အချက်များ
မျက်မှန်တပ်သူများ သိထားသင့်သည့် အချက်များ မင်္ဂလာပါ။One Daily Pageမှ ကြိုဆိုပါတယ်။မျက်မှန်တပ်သူတိုင်း ဒီပြဿနာတွေကို ကောင်းကောင်းသိမှာပါ။ မျက်မှန်အိတ်ကို ရှာရတာ ခက်သလို မျက်ကပ်မှန်တွေ တိမ်မလာအောင် တားတာကလည်း ခက်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ပေ့ခ်ျကနေ မျက်မှန်တပ်သူတွေ သိသင့်တဲ့…
ဘာကြောင့် အချို့မိခင်တွေက သူတို့ကလေးကို သဘောမကျကြတာလဲ
ဘာကြောင့် အချို့မိခင်တွေက သူတို့ကလေးကို သဘောမကျကြတာလဲ မင်္ဂလာပါ။One Daily Pageမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ကလေးလေးတစ်ယောက် တိုးလာတာက ပျော်စရာကိစ္စ ဖြစ်ပေမယ့် မိဘတွေရဲ့ 20%ကတော့ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက‌လည်း သူတို့ကို အပြစ်ပြောလို့တော့ မရပါဘူး။ သူတို့ကို အချိန်ပေးဖို့…
အမျိုးသမီး‌‌ေတွရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အသင့်တော်ဆုံး အားကစားနည်းများ
အမျိုးသမီး‌‌ေတွရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အသင့်တော်ဆုံး အားကစားနည်းများ မင်္ဂလာပါ။One Daily Pageမှ ကြိုဆိုပါတယ်။ယောဂကျင့်တာက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဦးစွာထိခိုက်နိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးပြဿနာအချို့ကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ပေ့ခ်ျကနေ အမျိုးသမီးတွေအတွက် အသုံးအဝင်ဆုံး လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်။…
သင်ပုံမှန်စားနေကြ အရာတွေကို ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်စားကြမလဲ
Jan 30, 2022 One Daily Media
သင်ပုံမှန်စားနေကြ အရာတွေကို ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်စားကြမလဲ မင်္ဂလာပါ။One Daily Pageမှ ကြိုဆိုပါတယ်။နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဒီအစားအစာတွေချည်း စားနေရတာ ငြီးငွေ့နေကြပြီလား။ မပူပါနဲ့ ဒီလိုငြီးငွေ့စရာကောင်းတဲ့ အစားအစာတွေနဲ့ပဲ ထူးထူးဆန်းဆန်းအစာတွေကို ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ပေ့ခ်ျကနေ သင်ပုံပုံမှန်စားနေကြ အစာတွေကို…
ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ အရွယ်တင်နုပျိုစေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းများ
ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ အရွယ်တင်နုပျိုစေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းများ မင်္ဂလာပါ။One Daily Pageမှ ကြိုဆိုပါတယ်။လေ့လာချက်တွေအရ ဂျပန်လူမျိုးတွေက အခြားသူတွေနှင့် ယှဉ်လျှင် ပိုနုကြပါတယ်။ သူတို့တွေ ဒီလိုနုပျိုနေတာက ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်မလဲ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ပေ့ခ်ျကနေ ဂျပန်လူမျိူးတွေ ကျင့်သုံးတဲ့ နုပျိုစေတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို…
ave collected the basic asanas that help the body to recover and feel great. And the best time to do have collected the basic asanas that help t
ave collected the basic asanas that help the body to recover and feel great. And the best time to do have collected…
ave collected the basic asanas that help the body to recover and feel great. And the best time to do have collected the basic asanas that help